Avanafil (330784-47-9) Orinasa mpamatsy mpamokatra
Avanafil dia ampiasaina hitsaboana fongilana erectile (ED: impotence; tsy fahaizana ahazoana na mitazona ery amin'ny lehilahy). Avanafil dia ao amin'ny kilasy fanafody iray antsoina hoe inhibitor phosphodiesterase (PDE). Miasa amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny rà mankany amin'ny penis mandritra ny famporisihana ara-pananahana. Io fitomboan-dra nitombo io dia mety hiteraka fionganana. Tsy mahasitrana ny disfunction erectile na mampitombo ny faniriana ara-pananahana i Avanafil. Tsy misoroka ny fitondrana vohoka na ny fihanaky ny areti-mifindra toy ny otrik'aretina immunodeficiency olombelona (HIV, hepatitis B, gonorrhea, syphilis) .Amin'ny fampihenana ny loza ateraky ny otrikaretina, dia ampiasao foana ny fomba sakana mahomby (tara-pohy na fimailana polyurethane / fofona nify). mandritra ny firaisana ara-nofo rehetra. Anontanio ny dokotera na ny pharmacist anao raha mila fanazavana fanampiny.
Fampahalalana Base Avanafil
anarana Avanafil vovoka
Molecular Weight 483.95g / Rol
Melt Point 150-152 ° C
Fotoana kely 30minutes
Fantatrao ve fa lehilahy maherin'ny 30 tapitrisa any Etazonia no tsy miasa erectile (ED)? Izany dia manazava ny antony mahatonga ny fanafody ED maro amidy any Etazonia. Ny iray amin'ireny fanafody ireny dia avanafil. Stendra no anarana marika avanafil izay mety ho fantatrao.
Avanafil (Stendra) dia mpanakana PDE-5 (phosphodiesterase-type 5) manakana ny PDE-5.
Rehefa mihinana an'ity zava-mahadomelina ity ianao dia hampihena ny lalan-dra sy ny hozatra ao amin'ny vatanao hanampy anao hanana fananganana amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fikorianan'ny rà mankany amin'ny penis. Noho io antony io dia ampiasaina hanasitranana ny tsy fetezan'ny erectile (ED). Toy ny Levitra® (vardenafil), Cialis® (tadalafil), ary Viagra® (sildenafil), ny avanafil dia hanamora ny fananganana sy ny fitazonana ny fananganana mandritra ny fotoana fohy.
Avanafil (Stendra®) dia vaovao ihany, izay novolavolain'i Mitsubishi Tanabe Pharma any Japon tamin'ny taona 2000. Nankatoavin'ny United States Food and Drug Administration (FDA) ny zava-mahadomelina tamin'ny volana aprily 2012 ho an'ny fitsaboana ED, raha nanaiky izany kosa ny maso ny fanafody eropeana tamin'ny volana jona 2013.
Avy amin'ny maro hevitra avanafil, ho hitanao fa vitsy ny vokany raha ampitahaina amin'ny Levitra, Cialis, Viagra, ary ny fanafody ED hafa.
Andao handalina lalina kokoa ary hahalala bebe kokoa momba an'io fanafody io.
Ahoana ny fomba itondran'i Avanafil ny tsy fetezan'ny erectile
Avanafil dia ampiasaina hitsaboana ED na tsy fahampian-tsakafo, izay faritana ho tsy fahafahana mahazo sy mitazona fananganana. Avanafil dia latsaka ao amin'ny sokajy fanafody manakana ny phosphodiesterase.
Mariho fa raha te hanana fananganana ianao, dia feno rà ny lalan-drà penilinao. Mitranga izany rehefa mihabe ny haben'ireo lalan-drà ireo, ka mampita ra bebe kokoa amin'ny filahianao. Mandritra izany fotoana izany dia hihena ny haben'ny fantson'ny rà manala ny rà amin'ny penisanao, ka miantoka ny fijanonan'ny ra ao amin'ny hozatra penile, ka maharitra kokoa ny fananganana.
Rehefa mandrisika anao hanao firaisana dia tokony hahazo fananganana ianao. Ity fananganana ity dia hahatonga ny filahianao hamoaka oksizena nitrika, fitambarana izay hahatonga ny guanylate cyclase (anzima) hamokatra cGMP (monicazyfat guanosine siklikika), iraka intracellular manan-danja izay mifehy ny fizotra ara-batana maro.
Raha ny tena izy dia io nucleotide siklikika io no tompon'andraikitra amin'ny fitsaharana sy ny fihenan'ny lalan-dra izay mitondra rà avy amin'ny sy ny filahiana hiteraka fananganana. Rehefa manimba cGMP ny anzima iray hafa, dia hahatratra ny habeny tany am-boalohany ny lalan-drà ka mahatonga ny ra handao ny filahiana, ary izany dia hanamarika ny faran'ny fananganana.
Rehefa mandray avanafil ianao dia hampiato ny PDE-5 tsy hanimba ny cGMP, midika izany fa hijanona maharitra kokoa ny cGMP ary haharitra ny fananganana anao. Arakaraka ny hijanonan'ny cGMP, ny halavan'ny fotoana hijanonan'ny rà ao amin'ny penisanao ary ny halaviran'ny fananganana anao.
Mahomby ve i Avanafil (Stendra) amin'ny fitsaboana ny tsy fiasan'ny erectile?
Na dia avanafil (Stendra) aza dia fanafody ED vaovao, fanadihadiana maro no manaporofo ny fahombiazany amin'ny fitsaboana ED. Nandritra ny fandinihana dimy natao tamin'ny 2014 mba hahitana raha mahomby io fanafody io, lehilahy 2,200 XNUMX no nandray anjara, ary izy rehetra dia tsy niasa erectile.
Tamin'ny faran'ny fandalinana dia hita fa mandaitra tokoa ny avanafil amin'ny fanatsarana ny IIEF-EF, ny index international ampiasaina hanombanana ireo olana mifandraika amin'ny fananganana.
Ireo lehilahy rehetra nihinana an'ity fanafody ity dia naneho fihatsarana miavaka tamin'ny IIEF-EF tamin'ny fatra hatramin'ny 50 ka hatramin'ny 200mg. Ny valin'ny fikarohana dia naneho ihany koa fa ny avanafil dia mandaitra kokoa amin'ny fatra ambony 200mg. Mampiavaka ny avanafil amin'ireo fanafody ED hafa izay miteraka voka-dratsy amin'ny fatra avo kokoa.
Tamin'ny fanadihadiana iray hafa natao tamin'ny 2012, ny avanafil dia hita fa nandefitra tsara ary tena mandaitra amin'ny fitsaboana ED. Ny roa tamin'ireo lehilahy izay nandray anjara tamin'ny fanadihadiana dia nanatsara fatratra ny fatra teo anelanelan'ny 100 ka hatramin'ny 200mg.
Ao amin'ny fisedrana ara-pitsaboana misy avanafil, nitatitra ny mpikaroka fa mampiseho fiakarana statistika lehibe amin'ny fiovan'ny efficacy rehetra mifandraika amin'ny ED. Ireo fitsapana ireo dia nahitana lehilahy 600 mahery tamin'ny fefy 23 - 88 taona.
Raha fintinina, ny avanafil dia mandaitra amin'ny fitsaboana an'i ED. Fikarohana marobe no nanaporofo fa afaka mamokatra fanatsarana azo refesina sy lehibe ho an'ny lehilahy rehetra manana ED izy, na inona na inona taonany.
Izay tsara kokoa Avanafil na Tadalafil?
Avanafil no zava-mahadomelina ED farany eny an-tsena, saingy tsara kokoa noho ny fanafody ED taloha. Ny Avanafil na ny Tadalafil dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny tsy fihenan'ny erectile, saingy misy fahasamihafana kely amin'ny fomba fiasa.
Raha ny tadalafil (Cialis) dia fanafody mahomby ho an'ny soritr'aretin'ny fivarotanisan'ny prostate sy ny erectile, matetika i Stendra no safidy voalohany ho an'ireo izay manana erectile erectile.
Avanafil vs Tadalafil: Iza amin'ireo no mandeha haingana kokoa?
Ny Tadalafil sy ny zava-mahadomelina erectile an'ny erectile voalohany dia maharitra eo anelanelan'ny 30 minitra ka hatramin'ny adiny iray mba hahatsapana ny vokany. Ary amin'ny tranga sasany, aorian'ny fihinananao zavatra mavesatra dia afaka maharitra adiny iray mahery ny fanafody vao manomboka miasa. Tsy izany no mitranga amin'ny avanafil.
Raha maka eo anelanelan'ny 100 - 200mg amin'ny vokatra ianao dia hahatsapa izany effet avanafil ao anatin'ny 15 minitra. Midika izany fa azonao atao ny maka minitra vitsy monja alohan'ny manomboka manao firaisana. Na dia mandray doka avanafil ambany aza ianao, dia lazao hoe 50mg, dia mbola hahazo fananganana ihany ao anatin'ny 30 minitra.
Avanafil vs Tadalafil: Iza amin'ireo no misy vokany vitsy kokoa?
Na dia misy fiatraikany sasany aza ny avanafil, ireo vokatra hafa ireo dia tsy mitovy amin'ny an'ny tadalafil. The voka-dratsy avanafil Tsy dia ratsy toa ny an'ny tadalafil ihany koa. Ohatra, ny avanafil dia mety tsy hiteraka tosidra ambany sy tsy mahita fahitana; ny vokany roa mifandraika amin'ny tadalafil sy fanafody ED hafa.
Tombony iray hafa amin'ny avanafil ny hoe azo alaina amin'ny doka avo kokoa nefa tsy miteraka voka-dratsy. Raha ny marina, ny fatra avo kokoa hatramin'ny 200mg dia azo alaina nefa tsy manahy momba ny voka-dratsiny.
Avanafil dia mihetsika tsy mitovy amin'ny tadalafil satria mikendry ny anzima 5 karazana phosphodiesterase, nefa tsy manafika anzima phosphodiesterase hafa toy ny PDE11, PDE6, PDE3, ary PDE1.
Tsy misy fiantraikany amin'ny sakafo i Avanafil.
Ny Tadalafil sy ireo fanafody tsy fetezan'ny erectile voalohany dia matetika no tsy dia mahomby aorian'ny fihinanana sakafo be dia be misy tavy matavy be. Izany dia mahatonga fanamby lehibe amin'ny fampiasana azy ireo satria tsy maintsy manara-maso ny ora fisakafoanana ianao ary mahatsapa koa ny zavatra hohaninao.
Etsy ankilany, ny avanafil dia tsy voakasiky ny sakafo nohanina, midika izany fa hankafy ny vokatra avanafil ianao na oviana na oviana ianao mihinana sy izay nohaninao. Noho io antony io dia tsara kokoa ny mihinana sakafo misy angovo avo alohan'ny hampiasana an'ity fanafody ity mba hanananao angovo ampy amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo.
Avanafil vs Tadalafil: Iza amin'ireo no azo ampiasaina amin'ny alikaola?
Soso-kevitra ny hamerana na hialana amin'ny alikaola rehefa misy fanafody tadalafil. Tadalafil dia fantatra fa mampihena ny tosidra, koa ny fitondrana azy miaraka amin'ny alikaola dia mety hampidina ny tosidra mankany amin'ny haavon'ny haavony.
Ny fihinanana zava-mahadomelina amin'ny alikaola dia mifandraika amin'ny soritr'aretina toy ny aretim-po, aretin'andoha, fikosehana, torana, maivana ary fanina. Etsy ankilany, azo antoka ampiasaina i Stendra, na dia misotro toaka aza. Afaka mankafy servisin'ny alikaola telo ianao alohan'ny handraisanao an'i Stendra, ary tsy hisy ny voka-dratsy na loza hafa mety hitranga amin'ny fahasalamanao.
Na izany aza, tsy midika izany fa afaka mandeha manao binge ianao avy eo mampiasa Stendra. Tokony hampiasa alikaola amin'ny antonony ianao satria ny alikaola ihany koa dia miteraka olana ara-pahasalamana. Ny alikaola dia mampitony, ary rehefa mampiasa be loatra ianao dia hampihena ny filanao ara-nofo izany ary ho sarotra aminao ny hanana fananganana. Midika izany fa ny alikaola dia manilika izay tanjon'ny fanafody ED.
Araka ny hita, avanafil dia manana tombony maro levitra. Izany no antony mahatonga ny mpitsabo maro hanome azy io amin'ny marary.
Inona no hataon'ny zava-mahadomelina hafa Misy fiantraikany amin'ny Avanafil?
Na dia tsy azo ampiasaina miaraka aza ny fanafody sasany, ny sasany dia azo atambatra mba hanatsarana ny fahombiazany. Ny rongony tsy azo atambatra dia ireo izay mifanerasera ary miteraka voka-dratsy. Izany no antony alohan'ny hametrahana fanafody anao dia ampahafantaro anao raha efa mihinana zava-mahadomelina hafa ianao. Tokony ho izany koa no izy raha te hanova fanafody na doka ianao. Aza manao na inona na inona samirery raha tsy ampidirina amin'ny mpitsabonao.
Ohatra, mananatra anao mafy tsy hampiasa avanafil miaraka amina fanafody toy ny Levitra, Staxyn (vardenafil), tadalafil (Cialis), na Viagra (sildenafil). Ireo zava-mahadomelina ireo dia ampiasaina ihany koa amin'ny fitsaboana ED sy hypertension arterial (pulmonary). Noho izany ny fampiasana azy ireo miaraka amin'ny avanafil dia mety be loatra amin'ny vatanao ary hiteraka voka-dratsy lehibe.
Alohan'ny hanombohanao hampiasa avanafil dia ampahafantaro ny mpitsabo anao raha mihinana fanafody hafa ianao, indrindra fa:
Ireo zava-mahadomelina ampiasaina hitsaboana ny tsy fetezan'ny erectile.
Ny antibiotika rehetra toy ny telithromycin, erythromycin, clarithromycin, sy ny hafa
Ny fanafody antifungal rehetra, anisan'izany ny ketoconazole, itraconazole, sy ny hafa
Ny zava-mahadomelina ampiasaina amin'ny fitsaboana aretin-tratra na fiakaran'ny tosi-drà, ao anatin'izany ny tamsulosin, terazosin, silodosin, prazosin, doxazosin, alfuzosin, sy ny hafa.
Ny fanafody hépatite C toa ny telaprevir sy boceprevir sy ny hafa.
Ny fanafody VIH / Sida toy ny saquinavir, ritonavir, indinavir, atazanavir, sy ny hafa.
Ireo lisitra etsy ambony dia tsy feno mihitsy. Misy fanafody hafa toa an'i Doxazosin sy Tamsulosin izay rehefa ampiasaina miaraka amin'ny avanafil dia hiteraka voka-dratsy. Ho fanampin'izany, zava-mahadomelina maro hafa tsy voavidim-panafody sy fanafody azo atao dia mety hifandray amin'ny avanafil. Anisan'izany ny vokatra raokandro sy vitamina. Ny farany dia tsy mampiasa zava-mahadomelina miaraka amin'ny avanafil raha tsy fantatry ny dokoteranao.
Tsy ny zava-mahadomelina ihany no tokony hitandremanao, fa tokony hitandrina ihany koa ianao rehefa manana aretina. Alohan'ny hampiasanao avanafil dia ampahafantaro ny dokoteranao raha manana an'ity olana ara-pahasalamana manaraka ity ianao.
Vazaha tsy ara-dalàna - raha manana filahiana miolikolika ianao na manana kilema hatrany am-bohoka ny filanao dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalamanao raha mampiasa avanafil ianao.
Raha 50 taona no ho miakatra ianao
Raha mijaly amin'ny kapila feno olona ianao, aretin'ny lalan-drà amin'ny lalan-drà, na ny masonao dia ambany ny tahan'ny kapoaka-to-disc, ary raha mijaly amin'ny aretim-po na diabeta ianao, dia avo ny tavy ao amin'ny ra (Hyperlipidemia) na avo tsindry (hypertension).
Ny fepetra hafa tokony hoentinao any amin'ny dokotera dia:
Olana mafy amin'ny maso
Marary tratra (angina)
Fitempon'ny fo tsy ara-dalàna (arrhythmia)
Olana amin'ny lalan-dra toy ny stenosis subaortika idiopatikika na stenosis aorta
Aretim-po niainana tao anatin'ny enim-bolana lasa.
Tsy fahombiazana ny fo
Tantaran'ny fifohana sigara
Fiakaran'ny tosi-dra (hypension)
Troboka ao anatin'ny enim-bolana lasa izay
Kanseran'ny ra (leukemia na myeloma maro)
Anemia sela marary, ankoatry ny hafa
PDI inhibitors, tafiditra ao Stendra, dia mifanerasera amin'ny sasany CYP5A3 inhibitors sy alpha-blockers. Noho io antony io dia zava-dehibe ny ampahafantaro ny dokotera raha mampiasa ireo fanafody ireo ianao. Amin'ny ankapobeny, ny avanafil dia vokatra mahomby sy azo antoka amin'ny fitsaboana ED.
Avanafil dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny tsy fihenan'ny erectile. Ny tombontsoa sasany avanafil dia misy ny fiasan'izy io haingana kokoa noho ny fanafody hafa rehetra ampiasaina amin'ny fitsaboana ED. Azonao atao ny mandray azy dimy ambin'ny folo minitra alohan'ny hanaovana firaisana ary mbola hahomby.
Tombony iray hafa amin'ny avanafil ny tsy mila mandray azy isan'andro hahomby, azonao atao ny mandray azy rehefa mila izany ianao. Avanafil zaka tsara amin'ny vatana ary azo alaina miaraka na tsy misy sakafo. Ny avanafil dia tsy manana effets effets secondaires toy ny fanafody ED hafa, ary azonao atao ihany koa ny mandray azy rehefa misotro toaka.
Ny fitsaboana ny ED dia iray monja amin'ireo avanafil mampiasa. Ity vokatra ity dia ampiasaina ihany koa amin'ny fitsaboana ny trangan-javatra niseho an'i Raynaud, aretina iray izay mahatonga ny faritra sasany amin'ny vatana hahatsiaro ho mangatsiaka sy ho moana. Ny fisehoan'i Raynaud dia mitranga rehefa mihena ny fikorianan'ny rà mankany amin'ny faritra amin'ny vatana, toy ny orona, lohalika, nipples, rantsantanana ary sofina. Io toe-javatra io koa dia miteraka fiovan'ny lokon'ny hoditra.
Ahoana ny fomba ahazoana tombony bebe kokoa amin'ny Avanafil
Avanafil dia hanampy anao hanana fananganana, saingy tsy midika izany fa afaka miala amin'ny foreplay ianao. Alohan'ny hanaovana firaisana dia ataovy anaty foreplay ny namanao raha tsy efa nihinana fanafody ianao. Aza adino fa ny avanafil dia hanampy anao hanana fananganana rehefa taitra ianao.
Aza misotro toaka be alohan'ny hampiasana avanafil. Ny alikaola be loatra dia mety hisakana anao tsy hankafy ny vokatra avanafil hatramin'ny farany. Ny fampifangaroana ny alikaola sy ny avanafil dia mety miteraka voka-dratsy toy ny fanina izay hampihena ny filanao ara-nofo sy ny fahombiazanao.
Aza misotro ranom-boaloboka ao anatin'ny 24 ora kasainao haka avanafil sy hanao firaisana. Ny ranom-boaloboka dia misy akora simika sasany izay hampitombo ny haavon'ny avanafil ao amin'ny làlandranao noho izany mampitombo ny fahafaha-miaina ny vokany sasany.
Omeo voninahitra ny fotoana nifaneraseranao tamin'ny mpitsabo mba hahafahany manara-maso ny fandrosoanao. Raha tsy mahavita fananganana ianao na dia efa naka avanafil aza ary niditra an-tsokosoko, na raha nanangana fananganana ianao, saingy tsy maharitra ela ny fanaovana firaisana ara-nofo sy hahatrarana orgasme dia mila ampahafantaro ny dokoteranao izany.
Mihatra koa izany raha toa ny avanafil toa mahery vaika loatra aminao; rehefa toa tsy mihena ny fananganana anao aorian'ny fanaovana firaisana ara-nofo. Ampahafantaro ny dokotera momba izany mba hahafahany mampihena ny fatrao. Aza adino koa ny tsy mandray avanafil betsaka kokoa noho izay omen'ny dokotera anao.
Mampiasa Avanafil (Stendra)
Mba hahomby ny avanafil dia hanampy izany raha raisinao araka ny nomen'ny dokoteranao azy. Hilaza aminao ny dokotera hoe ohatrinona no raisina ary amin'ny ora firy.
Toy ny fanafody erectile erectile hafa, avanafil dia mora ampiasaina. Ny fanafody dia avy amin'ny endrika vovoka na takelaka. Koa satria mihetsika haingana ny avanafil dia mila maka izany ianao eo anelanelan'ny 15 - 30 minitra alohan'ny hanaovana firaisana. Raha toa ny dokotera manome anao avanafil fatra ambany, lazao fa 50mg isan'andro, asaina mihinana fanafody ianao tsy latsaky ny 30 minitra alohan'ny hanaovana firaisana. Izay no fomba tsara indrindra ahazoana antoka mandray ny fanafody tanteraka ny vatanao. Tsara ny manamarika fa afaka mandray vovo-avanafil ianao rehefa noana dia tsy hisy fiatraikany ratsy amin'ny vatanao.
Ampirisihina ianao mba hihinana an'io fanafody io indray mandeha isan'andro. Ny mpitsabo anao dia hanara-maso ny fomba fandraisan'ny vatanao ny fanafody ary mety hanitsy ny doka ho anao hahazoana ny tombony avanafil feno.
Amin'ny maha fanafody fanafody anao dia mila miresaka amin'ny dokoteranao ianao mba hanome anao dokotera mialoha avanafil mividy. Hanontany anao fanontaniana maromaro ny dokotera ary, raha azo atao, dia manazaha andrana vitsivitsy hanampiana hamaritra hoe inona ny fatra avanafil sahaza anao miankina amin'ny ankapobeny. fahasalamana, taona, ary fanafody hafa mety ampiasainao. Mifikitra amin'ny avanafil dia mampiasa araka ny fampahalalana momba ny marika momba ny vokatra na araka ny natoron'ny dokoteranao. Aza adino fa ny avanafil dia tsy mitsabo ny aretina hafa ankoatry ny tranga ED sy Raynaud.
Avanafil dia misy amin'ny tanjaka telo samy hafa: 50, 100, ary 200mg. Azo inoana fa hanomboka anao amin'ny tanjaka 100mg ny dokoteranao, fa mety hanova ny fatra miankina amin'ny valin'ny vatanao. Isaky ny mividy vovoka avanafil ianao dia zahao ny marika mba hahazoana antoka fa manana tanjaka sahaza anao ianao.
Ny fanombanana ny ED dia tsy maintsy ahitana fanombanana ara-pitsaboana feno hahafantarana raha misy antony lehibe mahatonga azy io, ary koa hamaritana ireo safidy fitsaboana hafa. Ohatra, ny fitambaran'ny olana ara-tsaina sy ara-batana dia mety miteraka ED.
Ny toe-batana sasany dia mampihena ny valin'ny firaisana ara-nofo ka miteraka fanahiana mety hisy fiatraikany amin'ny fanaovana firaisana. Rehefa tsaboina ireo toe-javatra ireo dia azo averina amin'ny laoniny ny fiara mamoafady. Ny antony ara-batana mahazatra an'ny ED dia misy:
Atherosclerosis (lalan-dra mihidy)
Syndrome metabolika - Izany dia toe-piainana misy fitomboan'ny tosidra, ny tahan'ny insuline, ny kolesterola ary ny tavy amin'ny vatana.
Aretin'i Peyronie - raha mipoitra ao amin'ny filahiana ny vatan'ny paratra
Alkoholika sy fidorohana zava-mahadomelina / zava-mahadomelina
Ny ratra na ny fandidiana amin'ny tadin'ny hazon-damosina na ny faritra pelvika
Fitsaboana ny homamiadan'ny prostaty na prostaty
Ny atidoha dia mitana andraikitra lehibe amin'ny filan'ny nofo. Zavatra maro izay misy fiatraikany amin'ny fanentanana eo amin'ny lahy sy ny vavy dia manomboka amin'ny ati-doha. Ny antony ara-psikolojika an'ny ED dia misy:
Ahiahy, fahakiviana, na toe-javatra hafa misy fiatraikany amin'ny saina fahasalamana
Olana amin'ny fifandraisana izay vokatry ny tsy fahampian'ny serasera, ny adin-tsaina na ny ahiahy hafa
Fiainana tsy mahafa-po
ambany-tena na mahamenatra na
Ny tsy fahaizana mampiteraka ny namanao
Alohan'ny hanomezan'ny avanafil anao mpitsabo anao dia tsy ireo olana etsy ambony ihany no hojereny fa ireto manaraka ireto koa:
Loza mety hitranga amin'ny kardia
Raha manana aretim-po kardia efa nisy ianao dia mety iharan'ny aretim-po rehefa manao firaisana. Noho io antony io, ny fitsaboana ny erectile amin'ny avanafil dia tsy ampirisihina ho an'ireo izay manana aretim-po kardia ambany.
Ireo marary izay voabahana ny ventricle ankaviany na ireo izay tsy mahafehy ny tosidrà manery tena dia mora voan'ny Stendra sy ireo vasodilator hafa.
Ny mpampiasa sasany an'ny PDE5 dia nitatitra fananganana maharitra XNUMX ora mahery. Ny sasany koa dia nitatitra fananganana maharary izay maharitra mihoatra ny enina ora (priapism). Raha mahatsapa ny iray amin'ireo fepetra ireo ianao dia tokony hikaroka fitsaboana maika. Izany dia satria mety ho simba ny vatan'ny penile raha mangataka andro ianao ary mety hahavery ny herinao maharitra.
Ireo marary manana fihenan'ny anatomika penile (aretin'i Peyronie, fikorontanana, na fikorontanana) dia tokony hampiasa avanafil am-pitandremana be. Toy izany koa, ireo marary manana aretina mety hiteraka priapism dia tokony hitandrina ihany koa rehefa mampiasa avanafil.
Very tsy mahita
Raha mahatsapa fahaverezan'ny fahitana ianao amin'ny alàlan'ny fampiasana Stendra na mpanakanana PDE5 hafa dia tokony ampahafantaro ny dokoteranao haingana araka izay tratra ianao mba hahazoanao ny fitsaboana sahaza.
Ny fahaverezan'ny fahitana dia mety ho mariky ny NAION, toe-javatra mitranga amin'ny olona sasany izay mampiasa mpanakanana PDE5. Avy amin'ny maro hevitra avanafil, ho hitanao fa toe-javatra tsy fahita matetika io, fa tokony ho fantatrao izany.
Mihaino ny sofina
Ity dia fepetra iray hafa tsy fahita firy mifandraika amin'ny mpanakanana PDE5. Raha mampiasa avanafil ianao ary mahatsapa fihenam-po tampoka na fihenan'ny fihainoana, ampandreneso haingana ny dokoteranao. Ny fahaverezan'ny fihainoana dia matetika miaraka amin'ny fanina na tinnitus, saingy tsy miharihary fa ireo soritr'aretina ireo dia tsy maintsy vokatry ny mpanakanana PDE5.
Avy amin'ny dokotera ny mamaritra ny tena anton'ireto soritr'aretina ireto, fa raha sendra izany ianao, dia mety raha tsy mihinana avanafil ianao mandra-pahitanao dokotera mety.
Ny vokatr'i Avanafil
Stendra dia a azo antoka, fanafody mahomby izay tsy dia misy vokany firy, izay tsy misy miely. Ohatra, ny aretin'andoha, ny voka-dratsin'ny Stendra, dia misy fiantraikany amin'ny dimy ka hatramin'ny 10 isan-jaton'ny lehilahy izay mampiasa fanafody.
Ny vokatra hafa mahazatra an'ny avanafil dia ny fametahana rano. Avy amin'ny fanadihadihana avanafil, hita fa io aretina io dia miseho eo anelanelan'ny 3 - 4% -n'ny mpampiasa. Ny aretin'andoha sy ny fikosehana dia vokatry ny vokatry ny avanafil amin'ny fikorianan'ny rà ary ireo vokany hafa ireo dia mazàna miala aorian'ny ora maromaro. Ny voka-dratsin'ny avanafil hafa dia misy ny fitohanana amin'ny orona, soritr'aretina mangatsiaka (nasopharyngitis), ary fanaintainana miverina. Ireo voka-dratsy ateraky ny avanafil rehetra ireo dia miseho amin'ny isan-jaton'ny mpampiasa kely.
Aiza no hividianana Avanafil
Ianao ve te mividy avanafil? Raha izany dia tsy maintsy misafidy mpamatsy avanafil azo antoka ianao afaka manome toky anao fa ny vovoka avanafil novidinao dia kalitao tsara indrindra. Mpamatsy toy izany izahay. Miorina mivantana ny vokatra izahay avy amin'ny CMOAPI, mpanamboatra avanafil malaza.
Ny CMOAPI dia tsy vitan'ny manamboatra avanafil fotsiny fa misy ihany koa ireo fanafody tsy fetezana erectile hafa. Aza manahy momba ny vidin'ny avanafil. Tianay ny hiara-hiasa aminao hanome anao avanafil mandritra ny taona maro. Izany no antony mahamety ny volanay avanafil.
"Nanaiky an'i Stendra noho ny tsy fetezan'ny erectile ny FDA" (Famoahana gazety). Fitantanana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina (FDA). 27 aprily 2012.
"Spedra (avanafil)". Masoivoho fitsaboana eropeana. Nalaina tamin'ny 17 aprily 2014.
US 6797709, Yamada K, Matsuki K, Omori K Kikkawa K, "azota mitahiry azota misy 6-membered cyclic compound", dia namoaka ny 11 Desambra 2003, natokana ho an'i Tanabe Seiyaku Co
"VIVUS dia manambara ny fiaraha-miasa amin'ny Avanafil miaraka amin'i Menarini". Vivus Inc. Archive from the original on 2015-12-08.
"VIVUS sy Metuchen pharmaceutions dia manambara fifanarahana fahazoan-dàlana momba ny zon'ny varotra any STENDRA". Vivus Inc. 3 Oktobra 2016.